Shirkii Teendhada Afisiyooni oo galaya maalintii 4-aad | KEYDMEDIA ONLINE
Shirkii Teendhada Afisiyooni oo galaya maalintii 4-aad
Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa horay u shaaciyay in maalintiisii afaraad uu galayo shirkii golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Magaalada Muqdisho waxaa saddexdii maalin u dambeysay ka socday shir looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka dalka, iyadoo muran iyo khilaaf xoog leh oo soo kala dhex galay saamileyda siyaasadda awgeed dib looga dhacay xilligii doorashada ee la rabay in la qabto.
Golaha Wadatashiga Qaran ee doorashooyinka Soomaaliya oo uu shir guddoominayo RW Rooble ayaa shir uu uga socdaa Teendhada xeada ciidamada cirka ee Afisiyooni, waxaana sida warbixinno hore lagu sheegay la qorsheynayay in saddex maalin lagu soo gabagabeyn doono, iyadoo haatan ay u muuqato in loo baahday maalmo dheeraad ah.
Qodobadii muranka uu ka taagnaa ayaa dhammaantood aan laga gaarin heshiis rasmi ah, mana jirto wax wara oo kasoo baxay xubnaha ka qeyb galaya shirka, balse xafiiska Ra'iisul Wasaaraha oo usoo tabinaya warbaahinta madaxa bannaan shirka wararka ku saabsan ayaa tilmaamaya in ilaa iyo hadda guulo la gaaray, la iskuna af gartay qodobo muhiim ah.
Ma jirto cid madax bannaan oo xaqiijin karta guulaha la tilmaamay in la gaaray, warbaahinta ayaana bannaanka ka joogta shirka iyadoo ay socdaan kulamo gaar-gaar ah oo u dhaxeeeya madaxda ka qeyb galaysa shirka iyo siyaasiyiinta kale ee arrimaha doorashooyinka daneenaya kuwaasoo ay ku jiraan musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha.